वातावरण मन्त्रीको प्रतिवद्धताः मास्कमाडौंलाई काठमाडौं बनाउँछु
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०७, २०७४ समय: ८:४६:५९
यसअघि प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि चर्चामा आएका लालबाबु पण्डितलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि आफ्नो क्याबिनेटमा भित्र्याए, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय जिम्मा दिएर । यसपटक पण्डितले योजना बनाएका छन्– मास्कमाडौंलाई काठमाडौं बनाउने। उनले मन्त्री भएलगत्तैको आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘म वातावरणमन्त्री भएको एक घन्टाभित्र एउटा फोन आयो । फोनमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नुपर्छ भनियो । संगठित गिरोह धेरै छन् भनियो । मैले सोधें– कस्तो संगठित गिरोह ? जवाफ आयो– क्रसरवालातिर पनि हेर्नुहोला ।
पुराना गाडीवालातिर पनि हेर्नुहोला ।’उनले त्यसको जवाफ मन्त्री भएपछिको पहिलो औपचारिक कार्यक्रममा शनिबार साँझ सम्बोधन गर्दै दिए, ‘लालबाबु पण्डित आएको छ । हिम्मत गरेर आएको छ ।’ उनले थपे, ‘भेडाको नेता सिंह बनाइदियो भने भेडा पनि सिंह हुन्छ । सिंहको नेतृत्व भेडालाई दियो भने त्यो सिंह पनि भेडा हुन्छ । नेतृत्व कायल र डरपोक भयो भने उसले दिनमात्र बिताउँछ, परिवर्तन गर्दैन । हिजो के भयो, मलाई थाहा छैन । अब त्यस्तो हुनेछैन । जसले वातावरण बिगार्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’
उनले आफू प्रशासनमन्त्री भएपछिको अनुभव सुनाउन पनि छुटाएनन्, ‘म पहिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रीलाई त कुर्सीबाट थुतेर बाहिर लगेर जस्तोसुकै दण्ड दिन्छन् है राष्ट्रसेवकले भनी केहीले सुनाएका थिए ।’ उनले त्यसको जवाफ अहिले जस्तैगरी दिएका थिए, ‘लालुबाबु पण्डित आएको छ । कोही त्यस्तरी हिम्मत गर्ने भेटिँदैन । यसपटक वातावरण सुधार्न आएको छ । सबैको आशा विश्वास गरेर आएको छ । हिम्मत गरेर आएको छ।’
त्यसो त उनले आफूलाई व्यंग्य गरेर सुनाएको कविता वाचन गर्न पनि छुटाएनन्, भने, ‘म एक वर्षअघि कन्या क्याम्पसमा गएको थिएँ । मलाई एउटा व्यङग्यात्मक कविता सुनाइयो । त्यसको भाव थियो– हामी त युवती, युवतीले पनि मुख देखाउन नहुने । युवकको पनि मुख हेर्न नसकिने, कि मास्क कि हेलमेट । जिन्दगीमा हाम्रो कसरी मिलन हुन्छ ? हामी कसरी अगाडि बढ्छौं, बताइदिनुहोस् त मन्त्रीज्यू । मैले यो कुरा बिर्सिएकै छैन । एकले अर्काको अनुहार देख्न पाउन वातावरण छिटो बनाउने मेरो लक्ष्य छ । यहाँहरुको साथसहयोग चाहिन्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।